Dowladda Soomaaliya Oo Shaacisay Tirada Dadkii Ku Dhintay Qaraxii Muqdisho | Saxil News Network
Dowladda Soomaaliya Oo Shaacisay Tirada Dadkii Ku Dhintay Qaraxii Muqdisho
Muqdisho (Saxilnews.com)-Dowladda Soomaaliya ayaa xalay shaacisay tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay qarixii dhawaan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalda Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomalaiya Eng. Cabdiraxman Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 358 qof iyo 228 qof oo dhaawac ah.
Wasiirku waxa uu sheegay in sidoo kale nolol iyo geeri la la’yahay 56 qof halka 99 qof oo kolkii hore dhaawac ahaan cusbitaalada loo dhigay hadda cusbitalka laga saaray.
Sida uu sheegay Eng. Yariisow, 122 qof oo dhaawac ah ayaa loo qaaday dalka dibaddiisa, gaar ahaanna waddamada Kenya, Turkiga iyo Suudaan
si halkaa loogu soo daweeyo.
Ilaa saddex guddi oo dowladda ay u saartay xaaladdan, hay’ado iyo kooxo mutadawiciin ah ayaa soo uruuriyay xogtan ay haatan dowladda shaacisay.